Wasiirka Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka oo soo kormeerey dhismaha waddada isku xidhaysa Hargeysa iyo Balli-gubadle | Somaliland Post
Home News Wasiirka Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka oo soo kormeerey dhismaha waddada isku xidhaysa...
Wasiirka Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka oo soo kormeerey dhismaha waddada isku xidhaysa Hargeysa iyo Balli-gubadle
Hargeysa (SLpost)- Wefti uu hoggaaminayo Wasiirka Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland Md. Cabdillaahi Abokor Cismaan, ayaa kormeer ku maray dhismaha waddada isku xidhaysa Caasimadda Hargeysa iyo magaalada Balli-gubadle ee xarunta Gobolka Hawd.
Weftiga Wasiirka ee kormeerka u baxay shalay oo ay wehelinayeen Wasiirro ka tirsan Xukuumadda, Madaxda Hay’adda Waddooyinka Somaliland, Maamulka Gobolka Hawd iyo Degmada Balli-gubadle, Guddida gacanta ku haysa dhismaha waddadan, qurbo-joog, ganacsato iyo siyaasiyiin kale, iyagoo soo indho-indheeyey qaybaha dhismuhu ka socdo waddadan oo dhererkeedu dhan yahay 64km.
“Waxa aannu maanta qorshaheeda wadnay 11km oo dhismaha waddadan ah, iyadoo aynun 8km iyo 500mitir aad nala soo aragteen, halkan aynu taagannahayna waa 5km iyo 200mitir, waxaanay imminka ciideedii taalaa 2km iyo 600mitir. Guud ahaan waddada isku xidhaysa Hargeysa iyo Balli-gubadle waa 64km, markaa 64km waxa aannu maanta caro-kaawe dhigaynaa 11km oo ka mid ah, waxaanna ka guddi ahaan noo qorshaysan inta ay waddadu dhammaanayso in aannu anaguna wixii tabarucaadkayaga ah aannu keenno, dowladdana ka helno wixii tabarucaad ah ee ay ugu talogashay dhismaha waddadan.” Sidaa waxa yidhi xubnaha ku hadlayey magaca Guddida gacanta ku haysa dhismaha waddada Balli-gubadle.
Masuul ka socday Ururka la yidhaahdo Gurmad Relief oo halkaas hadal ka jeediyey, ayaa sheegay inay urur ahaan si weyn uga qaybqaateen dhismaha waddada Hargeysa ilaa Ball-gubadle, isla markaana ay ilaa hadda geliyeen lacag dhan $130 kun oo doollar, isla markaana ay hadda diyaar u yihiin inay ka sii qaybqaataan waddadan ilaa inta laga dhammaystirayo.
Maayirka magaalada Balli-gubadle Md. Cabdi Iimaan Jaamac oo halkaas ka hadlay, ayaa yidhi; “Waxa aynu joognaa waddada Balli-gubadle oo waddadani in badan ayey soo jiitamaysay, waxaanna imminka socda 11km, markaa waxa aan halkan ku wareejinayaa ballanqaadkii aan ballanqaaday ee ahaa $10 kun oo doollar ee saacadda jaraysay ee 100-ka saacadood ahayd, waxaanan ku wareejiyey Guddida waddadan.”
Waxa kaloo goobtaas hadal ka jeediyey Badhasaabka Gobolka Hawd Md. Yaasiin Maxamuud Shide oo sheegay in dhismaha iyo dhammaystirka jidadkani uu u baahan yahay in laga wada qaybqaato, waxaannu yidhi; “Waxa aan u mahadnaqayaa dhammaanba cidkasta oo ka qaybqaatay waddadan bilawgeedii iyo socoshadeeda ay imminka socotaba. Waxa kaloo aan u mahadnaqayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo ay ka go’an tahay in gobolkasta oo Somaliland ah inuu helo xuquuqdiisa, haddii ay ugu horayso waddo, caafimaad, biyo iyo waxbarasho oo mid walba ay ka go’an tahay inuu helo, markaa innaguna (Gobolka Hawd) waxaynu ka mid nahay gobollada ugu horeeya oo marka koowaad iyo mar labaadna waannu u mahadnaqaynaa Madaxweynaha.”
Wasiirka Horumarinta Maalgashiga Md. Maxamed Axmed Maxamuud (Cawad) oo isna goobta hadal ka jeediyey, ayaa tilmaamay in waddooyinku yihiin waxyaabaha fududaynaya in dalku helo dhaqaale iyo maalgashi xooggan, waxaannu yidhi; “Runtii waan ku hambalyeynayaa shacabka halkan ku dhaqan iyo guddidaba oo waxa aan leeyahay waxa aad samayseen wax aad tusaale ugu tihiin Gobollada kale ee dalka. Culayska ay leedahay iyo faa’iidada ay leedahayba marka la isku tashado qurbo-joogta iyo dadka degaankuba iyo ganacsatadaba, waxa isku-tashigaasna ka dhasha waddadaas quruxda badan ee aynu soo marnay.”
Wasiirka Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Somaliland Md. Cabdillaahi Abokor Cismaan oo ugu dambayntii halkaas hadal ka jeediyey, ayaa sheegay inay Wasaarad ahaan ku faraxsan yihiin dhismaha waddada isku xidhaysa Hargeysa iyo Balli-gubadle, isagoo xusay in waddooyinku yihiin waxyaabaha ugu adag ee dhismahooda laga shaqeeyo.